Ny karazany araka ny foko
Ny foko tsirairay dia samy manana ny mampiavaka sy ny mahakanto ny randrana misy ao aminy :
a) Antaimoro : ny lafitri-akondro, ny telo ankila, ny tsitombotomboka, vakimanasa.
b) Imerina : bango an-katoka, difisesy, kirozaroza, lakolosy, lambomiditra, randramadinika, tanaivoho.
c) Betsileo : Bango, bango anakova, bango tsotra, kiary, kifetriposa, kifehaka, kihohoka, kilafitsotsy, kilavoahibary kipetaka, kirazorazo, kisabo kisiny, kisahondra, kitelo, kidimy, kifito, kifolo an'ila, kitokandalana, kivona, randrana tsotra, randranketsa, rasaraka, tadim-pitana, tototsongo, valala mihoatra, vombory vonkavia, volo miramaha.
Any amin'ny faritra atsimo ny Madagasikara, ny endriky ny firandranana dia manambara hevitra iray. Ny taovolo dia zava-kanto nentin-parazana izay mitory ny taona, ny firazanan'ny olona iray, sy fiaramonina ny olona iray. Tena zava-dehibe amin'ny betsileo ny taovolo, amin'ny kolontsainy.
Ny vehivavy betsileo dia mibango ny volony amin'ny fomba manaraka ny endriky ny akapoben'ny zava-maniry sy ny biby eny amin'ny faritra misy azy.
Ny karazany araka ny foko Ny foko tsirairay dia samy manana ny mampiavaka sy ny mahakanto ny randrana misy ao aminy : a) Antaimoro : ny lafitri-akondro, ny telo ankila, ny tsitombotomboka, vakimanasa. b) Imerina : bango an-katoka, difisesy, kirozaroza, lakolosy, lambomiditra , randramadinika, tanaivoho . c) Betsileo : Bango, bango anakova, bango tsotra, kiary, kifetriposa, kifehaka, kihohoka, kilafitsotsy, kilavoahibary kipetaka,...
# Posted on Monday, 26 November 2012 at 5:44 AM
Edited on Friday, 30 November 2012 at 12:12 PM